Jamaahirta Liverpool Oo Cadho Kula Dhacay Garsoore Martin Atkinson Iyo Kulamada Uu Goolhaye Alisson Ganaaxa Ku Seegayo. - Gool24.Net
Jamaahirta Liverpool Oo Cadho Kula Dhacay Garsoore Martin Atkinson Iyo Kulamada Uu Goolhaye Alisson Ganaaxa Ku Seegayo.
Goolhayaha kooxda Liverpool ee Alisson ayaa seegi doona kulanka adag ay kooxdiisa la ciyaari doonto Everton ka dib markii uu casaan toos ah qaatay kulankii ay maanta ka badiyeen kooxda Brighton.
Jamaahiirta Liverpool ayaa jaho wareer ka qaaday hadal uu shaaciyay LFTV kaas oo uu ku sheegay in Alisson uu diyaar u noqon karo kulanka Everton balse uu ganaaxiisu ka bilaami doono kulanka Bournemouth balse waxaa la filayaa in ganaaxa Alisson uu ka bilaabi doono kulanka ugu soo horeeya.
Taageerayaasha Liverpool ayaa baraha bulshada ku karbaashay garsoore Martin Atkinson oo ay u arkaan in uu markastaba dhibaato ku abuuro kooxdooda Reds kadib kulamo uu hore u soo maamulay Reds oo ay xaaladu ku adkaatay.
Goolhayaha reer Brazil ayaa waxaa casaan toos ah siiyay garsoore Martin Atkinson madaama uu gacanta ku taabtay kubad isagoo ka soo baxay xeradiisa goolka.
Alisson ayaa damcay inuu madaxeeyo kubada laakiin markii uu arkay in looga soo hormarayo kubada waxa uu ku bixiyay gacantiisa isagoo ka fog xeradiisa gool taasoo keentay in casaan toos ah loo taago.
Adrian ayaa goolka ka bedelay goolhayaha koowaad ee Liverpool si la mid ah sidii uu sameeyay markii uu Alisson dhaawac ku maqnaa bilowgii xilli ciyaareedkan.
Laakiin ganaaxa goolhayaha ayaa ku sii aadeysa waqtigii ugu xumaa ee kooxda hogaamineysa Premier League madaama ay galayaan xilli ay ciyaari doonaan kulamo badan oo xiriir ah.
Alisson waxa uu ganaax ku seegi doonaa kulanka Merseyside derby ee ay bartamaha isbuucaan la dheelayaan kooxda Everton.
Goolhayaha Liverpool ayaa sidoo kale ganaax ku seegi doona kulanka ay booqanayaan Bournemouth iyo kulanka ay soo dhaweynayaan Watford iyada oo Adrian oo qalad sameeyay kulankii Brighton uu markale buuxin doono booska goolhayaha kowaad ee Reds.
Tababare Jurgen Klopp ayaa isagoo ka hadlayay casaanka uu qaatay goolhayihiisa waxa uu yidhi: “Waxaan qabaa inay aheyd kubad uu gacanta ku taabtay laakiin anigu ma aanan arkin. Ma jirin offside sidaasi darteed waxay aheyd xaalad adag.
“Wuxuu boqolkiiba 100 doonayay inuu kubada madaxeeyo laakiin ciyaaryahanka kale ayaa ka soo hormaray sidaasi darteed waxba kama bedeli karno taas”.
“Virgil van Dijk ayaa ahaa xiddiga garoonka madaama uu labada gool dhaliyay laakiin Adrian ayaa aniga ii ah xiddiga garoonka madaama uu garoonka soo galay isagoo aan diyaar aheyn islamarkaana labo badbaadin sameeyay.”